अर्थ/वाणिज्य – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । साताको चाैथाे दिन अर्थात आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनको ह्वात्र्त घटेको छ । मंगलबार एकै दिन १२०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ बुधबार भने प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ९६ हजार […]
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वात्तै रहेको छ। आइतबार एकै दिन १५०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ सोमबार भने स्थिर रहेको थियो भने आज मंगलबार पुनः १२०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९६ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार […]
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आज (आइतबार) पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला १५०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार […]
काठमाडौँ । नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु १०० ले बढेर रु ९४ हजार तोकिएको छ । पहेँलो धातु अधिल्लो दिन प्रतितोला रु ९३ हजार ९०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९३ हजार ५०० कायम भएको छ । जसको […]
काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अर्थात आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ झन् उकालो लागेको छ । बुधबार प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज पनि प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार […]
प्राधिकरणमा जुनियर कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन मन्त्रीसम्म सेटिङ
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जुनियर कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन गिरोह नै सक्रिय भएर लागेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको कार्यकाल गएको पुस २३ गते नै सकिएको छ । उनको कार्यकाल सकिएपछि ११ औं तहमा कार्यरत प्रदिप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नै लागि परेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ […]
सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको प्रश्न– हाम्रो ३५ अर्ब भुक्तानी कहिले हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी मार्कामा परेका छन् । विभिन्न आयोजनाको करिब ३५ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । काम सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको पनि सरकारले भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । विभिन्न आयोजनाहरुका करिब ३५ अर्बभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष […]
काठमाडौं । सोमबार तीन कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पाँचथर पावर कम्पनी, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त र अरुण काबेली पावर कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँचथर पावर कम्पनी पाँचथर पावर कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । […]
घट्यो सुनको मूल्य, सुन यस महिनाकै सस्तो !
काठमाडौँ । आज पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज पनि तोलामा ४०० रुपैयाँलेको घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार छापावाल सुन आइतबार प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार […]